Roborock Dya, ilay mpanadio vovo tànana mando sy maina mandroso indrindra | Vaovao Gadget
Roborock Dya, ny banga vita amin'ny tànana mando sy maina indrindra
Roborock no nitarika ny fanavaozana ny teknolojia teo amin'ny sehatry ny fanadiovana marani-tsaina, tato ho ato efa nandinika ny Roborock S7 izahay torak'izany koa tobim-pako, ary ankehitriny izy ireo dia manova vokatra hanatsarana ireo efa misy, mandalo na dia ny tany izay toa nanjakan'ny marika hafa taloha aza.
Navadik'i Roborock ny tsenan'ny banga aman-tànana miaraka amin'i Dyad, maodely mando sy maina mahomby. Andao hojerentsika ny fiasa amin'ity vokatra Roborock vaovao tokana ity.
Ity Roborock Dyad ity mamantatra ny tasy mampiasa rafitra fanadiovana mifanaraka amin'izany, amin'ny alàlan'ny fandroahana, fanosehana ary fanamainana, famonoana rano sy rano maloto ao anaty tanky 620 ml. Mamoaka rano madio amin'ny tany izy raha miasa kosa ny rolany hanala ny loto.
Izy io dia manana roera roa ao aoriana ho an'ny sisiny ary koa motera roa izay misaraka manokana dia afaka mamelona ny rojomara telo amin'ny ankapobeny, rafitra tokana eo amin'ny tsena.
"Ankoatra ny fitiavantsika ny haitao, ao Roborock no mamaritra ny
fitiavana ny fanavaozana ny teknolojia. Noho izany, Dyad koa dia vokatra mpisava lalana
amin'ny sokajy misy azy. Misaotra ny rafitra DyadPower, i Dyad no hany mpanadio vacuum ao
mando sy maina izay moterany roa dia mitondra rafitra maromaro
roller, ka manome fanadiovana mahomby sy fanesorana ny loto avy a
nandalo, koa manamorona ny sisiny. Noforoninay ity vokatra multipurpose ity izay
mahavita manala amin'ny rano maloto mankany anaty loto mikitroka, mampiasa a
rafitra fanadiovana vaovao - Richard Chang, CEO an'ny Roborock.
Ho fanampin'izay, manana a rafitra fanadiovan-tena mandeha ho azy amin'ny tsindry bokotra, miaraka amin'ny fampisehoana LED izay hahafahantsika mamantatra ireo faritra amin'ny gorodona mifantoka indrindra amin'ny loto indrindra, miaraka amina rafitra fanairana feo izay efa tafiditra amina vokatra Roborock hafa. Toy izany koa, Ny batterie 5000 mAh dia hamela fanadiovana tsy tapaka mandritra ny 35 minitra na hatramin'ny 280 metatra toradroa.
Roborck Dyad dia ho hita any Eropa amin'ny 11 Novambra amin'ny vidiny $ 449 € amina toeram-pivarotana lehibe toy ny AliExpress.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Roborock Dya, ny banga vita amin'ny tànana mando sy maina indrindra
Chopbox dia takelaka fanapahana 5in1 marani-tsaina, hanampy anao ve ianao? [Fanadihadiana]
Philips Momentum 278M1R, famakafakana lalina